Dambudziko 5: kufa kwezvipfuwo (1-7)
Dambudziko 6: mamota pavanhu nepazvipfuwo (8-12)
Dambudziko 7: chimvuramabwe (13-35)
Farao achaona simba raMwari (16)
Zita raJehovha richaziviswa (16)
9 Saka Jehovha akati kuna Mozisi: “Pinda muna Farao uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha Mwari wevaHebheru: “Rega vanhu vangu vaende kunondishumira.+ 2 Asi kana ukaramba kuti vaende uye ukaramba uchivatadzisa kuenda, 3 ruoko rwaJehovha+ ruchauya pazvipfuwo zvako zviri kumafuro. Denda rinoparadza+ richava pamabhiza, pamadhongi, pangamera, pamombe nepamakwai. 4 Uye Jehovha achaita kuti pave nemusiyano pakati pezvipfuwo zvaIsraeri nezvipfuwo zveIjipiti, uye hapana kana chipfuwo chimwe chete chevaIsraeri chichafa.”’”+ 5 Jehovha akataurawo kuti aizozviita riini, achiti: “Mangwana Jehovha achaita izvi munyika ino.” 6 Jehovha akaita izvi mangwana acho chaiwo, uye zvipfuwo zvemarudzi ese zveIjipiti zvakatanga kufa,+ asi hapana kana chipfuwo chevaIsraeri chimwe chete chakafa. 7 Farao paakabvunza, akanzwa kuti hapana kana chipfuwo chimwe chete chevaIsraeri chakanga chafa. Kunyange zvakadaro, mwoyo waFarao wakaramba wakaoma, uye haana kurega vanhu vacho vachienda.+ 8 Jehovha akabva ati kuna Mozisi naAroni: “Zadzai maoko enyu nechin’ai chemubisiro,* uye Mozisi anofanira kuchimwaya mudenga ari pamberi paFarao. 9 Uye chichava guruva rakatsetseka panyika yese yeIjipiti, chova mamota anoputika pavanhu nepamhuka munyika yese yeIjipiti.” 10 Saka vakatora chin’ai chemubisiro vakamira pamberi paFarao, uye Mozisi akachimwaya mudenga, chikava mamota anoputika aibuda pavanhu nepamhuka. 11 Vapristi vaiita zvemashiripiti vakatadza kumira pamberi paMozisi nekuda kwemamota, nekuti mamota akanga abuda pavapristi vaiita zvemashiripiti nepavaIjipiti vese.+ 12 Asi Jehovha akarega mwoyo waFarao uchioma, uye iye haana kuvateerera, sezvakanga zvaudzwa Mozisi naJehovha.+ 13 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Fumomuka umire pamberi paFarao, uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha Mwari wevaHebheru: “Rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira. 14 Nekuti iye zvino ndava kuunza matambudziko angu ese pauri, nepavashandi vako, uye pavanhu vako, kuti uzive kuti hakuna mumwe akafanana neni panyika yese.+ 15 Nekuti kutaura kuno ndingadai ndakatambanudza ruoko rwangu ndakakurova nedenda rinoparadza, iwe nevanhu vako, uye mungadai musisipo* panyika. 16 Asi ndaita kuti urambe uchirarama nechikonzero ichi: kuti ndikuratidze simba rangu uye kuti zita rangu riziviswe panyika yese.+ 17 Uchiri kuzvikudza kuvanhu vangu uchivarambidza kuenda here? 18 Zvino mangwana senguva dzino ndichaita kuti kunaye chimvuramabwe chikuru kwazvo, chisati chamboitika muIjipiti kubvira pazuva rayakavambwa kusvikira zvino. 19 Saka tumira shoko kuti zvipfuwo zvako zvese zviri kumafuro nezvinhu zvako zvese zviri kunze zvipinzwe mukati. Munhu wese nemhuka zvichabatwa zviri kumafuro uye zvisina kupinzwa mumba, zvichaurayiwa nechimvuramabwe.”’” 20 Mushandi wese waFarao aitya shoko raJehovha akakurumidza kuisa vashandi vake nezvipfuwo zvake mumba, 21 asi wese asina kuteerera shoko raJehovha akasiya vashandi vake nezvipfuwo zvake kumafuro. 22 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Simudza ruoko rwako kudenga, kuti chimvuramabwe chiuye panyika yese yeIjipiti,+ pavanhu nemhuka nepazvinomera zvese zvenyika yeIjipiti.”+ 23 Saka Mozisi akasimudza tsvimbo yake kudenga, uye Jehovha akaunza mabhanan’ana nechimvuramabwe, uye moto* wakadzika panyika, uye Jehovha akaramba achinayisa chimvuramabwe panyika yeIjipiti. 24 Kwaiva nechimvuramabwe, uye kwaiva nemoto waipenya mukati mechimvuramabwe. Chakanga chakakura chaizvo; kwakanga kusati kwamboitika zvakadaro munyika yacho kubvira payakatanga kugarwa nevaIjipiti serudzi.+ 25 Chimvuramabwe chacho chakarova zvinhu zvese zvaiva kunze munyika yese yeIjipiti, kubvira pavanhu kusvikira kumhuka, uye chakarova zvinomera zvese, chikaparadza miti yese yesango.+ 26 MuGosheni chete, maigara vaIsraeri, ndimo makanga musina chimvuramabwe.+ 27 Saka Farao akatumira shoko kuti Mozisi naAroni vauye, akati kwavari: “Iye zvino ndabvuma kuti ndatadza. Jehovha akarurama, asi ini nevanhu vangu hatina kururama. 28 Tetererai Jehovha kuti mabhanan’ana aMwari nechimvuramabwe zvipere. Ndichabva ndakuregai muchienda, uye hamuzorambi muri muno.” 29 Saka Mozisi akati kwaari: “Pandinongobuda muguta ndichasimudza maoko angu pamberi paJehovha. Mabhanan’ana achapera uye chimvuramabwe hachizorambi chiripo, kuti muzive kuti nyika ndeyaJehovha.+ 30 Asi kana muri imi nevashandi venyu, ndinotoziva kuti kunyange ndadaro, hamusi kuzotya Jehovha Mwari.” 31 Furakisi* nebhari zvakanga zvarohwa, nekuti bhari yakanga yatumbuka uye furakisi yakanga yava kutanga kutumbuka. 32 Asi gorosi nesipereti* zvakanga zvisina kurohwa, nekuti zvakanga zvichiri kure kuti zviibve.* 33 Mozisi akabva abuda muguta achibva kuna Farao, akasimudza maoko ake pamberi paJehovha, mabhanan’ana nechimvuramabwe zvikatanga kunyarara, uye mvura yaitsvotsvoma panyika yakagasa.+ 34 Farao paakaona kuti mvura yakanga yagasa uye kuti kwakanga kusisina chimvuramabwe nemabhanan’ana, akatadza zvakare, akaomesa mwoyo wake,+ iye nevashandi vake. 35 Mwoyo waFarao wakaramba wakaoma, uye haana kurega vaIsraeri vachienda, sezvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Mozisi.+
^ Kana kuti “makatsakatiswa; makatsvairwa.”
^ Pamwe uku kutsanangurwa kwemheni ine simba.
^ Kana kuti “zvaidyarwa mwaka wafamba.”